Ukuthengisa okuShushu okuShushu kwexabiso eliphantsi iBonnell Spring Mattress yabenzi baseAfrika | Rayson
Imemori yeMatrasi yeMemori
Umatrasi wePo Foam
I-3 Star Star iMatrasi
Iimatrasi eziyi-5 zehotele
Iimatrasi eziyi-4 zehotele
Imemori yePilisi yeMemori
Ipholiyesta yefayibha yomqamelo
Pocket Spring umatrasi
Umatrasi waseBonnell waseNtwasahlobo
Imatrasi eqhubekayo yasentwasahlobo
Ukuqengqeleka kweBonnell Spring Mattress
Waqengqa Pocket Spring umatrasi
Isiseko seBhedi yehotele
Ukuthengisa okuShushu okuShushu kwexabiso eliphantsi iBonnell Spring Mattress yabenzi baseAfrika
Fumana ulwazi! fumana iinkcukacha malunga nokuThengisa ngokuThengisa ngexabiso eliphantsi iBonnell Spring Mattress ye-Afrika, i-bonnell spring mattress, i-damask bonnell mattress, i-Bonnell Spring Mattress
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Ezona mveliso ziphambili Zithengisa ngokuThengisa ngexabiso eliphantsi iBonnell Spring Mattress yabenzi baseAfrika
Imveliso ibonakaliswa kukuguquguquka okuphuculweyo. Iyakwazi ukuxhasa izikhombisi ezininzi ukugqibezela iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi emininzi.
I-Rayson Global Co., Ltd yintsebenziswano yase-Sino-US, eyasungulwa ngo-2007 e-Shishan Town, eFoshan High-Tec
Abathengi abafuna ukwazi ngakumbi ngemveliso yethu entsha okanye inkampani yethu, qhagamshelana nathi nje. Siyathembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo. Emva kweminyaka yophuhliso, siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu kulo lonke ihlabathi. Nceda uqiniseke ukuba sinelungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu kwaye ngekhe kubekho monakalo wenzekileyo kwimpahla ehanjisiweyo. Siyakwamkela ngokunyanisekileyo umbuzo wakho kunye nomnxeba.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo? I-LC ekuboneni / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% eseleyo ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa witinin iintsuku ezisi-7 zomsebenzi. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho. 2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela. 3.Qengqa umatrasi otywiniweyo ongenamntu uyokulala ebhedini yakho 4.Yisika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki. 5.Vumela iiyure ezingama-24 ukuba umatrasi wakho omtsha wandise ngokupheleleyo.Ndinokundwendwela umzi-mveliso wakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukuba ikulande.
Elona xabiso liphezulu leShumi leNtengiso eshushu yeNtwasahlobo iMathumbu
Intsika yamaphupha amnandi ePlush Pocket Spring Matress
Ixabiso elifanelekileyo loQokelelo lwePasile yoQeqeshiso lwabavelisi beMathematics
HighQuality Latex memory foam umqamelo umqulu we-Wholesale-Rayson Spring umatrasi yoMvelisi
Umqolo weLatex Phezulu 3 Imimandla ePocket Spring Matress
Iimveliso zeBlueUbunjani obuBalaseleyo obuvela eChina Iindleko eziphantsi komqamelo wePolyester ozigcwalisileyo kwiPillows Factory
Ukuthengiswa okuGqwesileyo okuGqwesileyo okuGqwesileyo okuGcina amagwebu abenzi bomenzi
Izinto ezilungileyo zeTshayina eziThengisayo ngePolyester yePolystyrene Umthengisi